Ny famintinana ny Google I / O 2015 miaraka amin'ny vaovaony rehetra | Androidsis
Famintinana ny zavatra rehetra hitantsika tao amin'ny Google I / O 2015
Omaly dia iray amin'ireo andro mahagaga ho an'ny Android tahaka ny nitranga vao herintaona lasa izay rehefa naseho ny topy maso Android L. Ora vitsivitsy an'ny Keynote izay hameno vaovao sy lahatsoratra ny haino aman-jery rehetra manerana ny planeta mandritra ny andro vitsivitsy miaraka amin'ny vaovao rehetra mifandraika amin'ny Google Now, Android M, Android Wear, Shine, Google Photos ary maro hafa.
Andro iray taty aoriana dia afaka milamina kokoa isika, ary makà fotoana kely hamintinana ny vaovao rehetra izany dia nametaka ny efijery omaly, raha nijery ny Keynote mivantana mivantana tao amin'ny Google I / O ary i Sundar Pichai no nandray ny fitenenana nanombohana ny hetsika.
1.1 Tsipiriany kely nefa manan-danja lehibe
3 HBO amin'ny Chromecast
4 Inona no vaovao ao amin'ny Google Apps
4.1 Google sarintany ivelan'ny Internet
6 Tetikasa Brillo sy Weave
7 Tetikasa lava sy tetik'asa virtoaly
9 Fanomezana toy ny valiha
Nampahafantarina omaly ary anio dia efa ananantsika izany ho an'ny misintona sy mametraka toy ny sary factory.
Fanaraha-maso granular amin'ny alàlan'ny fampiharana: ny app dia hangataka amin'ny mpampiasa hampandeha ity fahazoan-dàlana ity rehefa hampiasaina voalohany.
Fanohanana fampiasa fantsom-tànana default: ampiasaina hanalana ny fitaovana, hividy ao amin'ny Play Store na hanao micropayments ao anaty fampiharana.
Famandrihana bateria sy fitantanana: "Doze" ho an'ny Android M dia midika fa hiditra amin'ny fomba torimaso ny fampiharana ary angatahina matetika indraindray izay midika fa haharitra indroa maharitra ny bateria. Ny USB Type C dia hamela ilay fitaovana hampiasaina ho batterie hampiasain'ny hafa, ankoatry ny fiasa hafa.
Rindrambaiko mampifandray: Android dia hanokatra rohy mankany amin'ny apps mivantana fa tsy mila mandalo ny menio fizarana.
Android Pay: mifamatotra akaiky amin'ny sensor sy ny NFC. Hamela fandoavam-bola haingana ary azo ampandehanana amin'ny alàlan'ny fampiharana Android na fampiharana hafa avy amin'ny banky hafa.
Fanandramana tranonkala tsara kokoa: amin'ny alàlan'ny tabilao Chrome manokana izay azo entina amin'ireo fampiharana an'ny antoko fahatelo. Io dia hahafahana mitahiry tahiry ho an'ny firenena an-dàlam-pandrosoana ary haingam-pandeha amin'ny fametrahana azy ireo.
Tsipiriany kely nefa manan-danja lehibe
kokoa fifantenana lahatsoratra.
Nihatsara ny mizara menio: hianarin'ny rafitra izay apps matetika no be mpampiasa indrindra.
Fanaraha-maso tsotra kokoa: fifehezana manokana ny fampandrenesana, ny fanairana sns.
Auto-backup amin'ny fampiharana: ny fikirana nofidinao isaky ny fampiharana dia ho voatahiry hahafahana mamerina azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Taorian'ny fampidirana ny Android M, nifindra tany amin'ny vaovao Android Wear i Google, izay mampiseho ny lanja omenao ny smartwatches na ny akanjo entina. Ny zavatra tena nahagaga dia ny tanjon'i Google ho an'ny fihetsika tsotra hijerena ny fotoana ho loharanon'ny aingam-panahy ho an'ny ankamaroan'ny hetsika azo tanterahina amin'ny smartwatch.
"Mandrosoa foana" na "mandeha foana" izao amin'ny apps.
Fihetsiketsehana tanana amin'ny fampandrenesana. Efa hitantsika izany tato ho ato horonan-tsary mampiseho sary tsara.
Una ho tonga ny fanavaozana vaovao mandritra ny herinandro vitsivitsy miaraka amin'ny hevitra fa isaky ny Android Wear dia mora ampiasaina sy mifanerasera.
Manaova sary emoji eo amin'ny efijery izany dia hoekena ho toy ny fikarohana ao anatin'ny fitaovana.
Fampiharana mihoatra ny 4000 misy ary vitsivitsy izay nampianariny ary ho eo amintsika tsy ho ela toy ny Foursquare na Uber.
ankehitriny ny fampiharana rehetra dia hanana fidirana amin'ireo sensor rehetra amin'ny fitaovana Android Wear.
HBO amin'ny Chromecast
Sundar Pichai nanambara ny fahatongavan'ilay fantsom-pahitalavitra HBO tany Chromecast, izay hidika fa afaka miditra amin'ny fizarana amin'ny andiany fahitalavitra Game of Thrones sy fandaharana haino aman-jery avo lenta avo lenta ireo mpampiasa.
Vaovao rehetra ho an'ny mpanjifa dodona amin'ny andian-tsarimihetsika.
Inona no vaovao ao amin'ny Google Apps
Google sarintany ivelan'ny Internet
Ya nanambara izahay omaly ny fahatongavan'i Google Maps amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ny fidirana feno amin'ny sari-tany ivelan'ny Internet izay hahafahantsika misintona azy ireo mialoha mba hahafahantsika manana azy ireo rehefa mizaha.
Hetsika izay dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fahatongavan'i Nokia HERE Maps. Ny iray amin'ireo zava-baovao farany dia ny fivezivezena isaky ny mandeha.
Amin'ireo vaovao izay nahaliana anao indrindra dia ny fanombohana ny Google Photos omaly. Araka ny niantsoan'izy ireo azy omaly, io no ho «trano» an-tsary rehetra amin'ny findainao Android ary ho tonga lafatra ny zava-drehetra dia mamela tahiry tsy voafetra ny sarinao rehetra. Hampakatra azy ireo ho 16MP ho an'ny sary sy ny vahaolana 1080p ho an'ny horonan-tsary.
Azo alaina ao amin'ny Play Store miaraka amin'ny fanamafisana lehibe amin'ny famolavolana ary ny fahaizany mamantatra endrika na zavatra ao anatin'ny sary nalaina.
Inona no vaovao ho an'ny mpamorona: saika hananan'izy ireo safidy rehetra hanehoana ny fampiharana sy ny lalao video toa ny pejy YouTube.
Hikaroka «hendry»: ny tanjona dia ny hahitan'ny mpampiasa fomba mahomby kokoa karazana karazana fampiharana rehefa mampiasa lohahevitra tsy dia mazava loatra izy ireo.
"Kintan'ny fianakaviana": eto ny kintana dia ny fianakaviana araky ny anarany ary hampahafantariny anao ny karazana taona mety amin'ny fampiharana na lalao video sahaza azy.
Azo ampiasaina amin'ny rehetra ihany ny Inbox, ny filokana voafaritra avy amin'i Google hahafahan'ny mpampiasa mitantana tsara ireo mailaka rehetra tonga mandritra ny andro.
Ianao dia afaka midira amin'ny fampidinana azy maimaim-poana manomboka izao ao amin'ny Play Store.
Google Now dia manana fizarana samirery ary izany, toy ny amin'ny Android Wear, dia mandray anjara amin'ny ezak'i Google mandritra ny volana sy taona ho avy.
Ny iray amin'ireo tanjona dia ny fanatsarana ny fahalalana ny sahan-kevitry ny baikon'ny feo Ary midika izany fa ny tahan'ny lesoka momba ny fitenenana an'i Google Now dia nidina hatramin'ny 8% raha 23% tamin'ny taon-dasa.
"Now on tap" dia iray amin'ireo zava-baovao farany amin'ny Android M miaraka amin'ny Google Now ho an'ny telefaona. Mihaino hira iray ianao ary anontaniana ny Google Now hoe "Iza no tena anaranao?", Ka mamaly izany amin'ny anaran'ny mpihira na ny tarika. Izy io dia misy ifandraisany betsaka amin'ny fahatakarana ny sahan-kevitra.
Tetikasa Brillo sy Weave
Ny Internet amin'ny zavatra dia eto amin'ny alàlan'ny Brillo sy Weave. Mamirapiratra amin'ny maha-ianao anao ny rafitra miasa izay tsy mila mihoatra ny 32 na 64MB ho an'ny fametrahana azy sy Weave satria io no "fiteny iraisana" ahafahan'ny fitaovana mifampiresaka amin'ny Internet sy ny telefaoninao.
Miaraka Weave ny varavarana dia afaka mamaritra ny "mihidy" sy "mihidy" mba hahafahan'ny fitaovana hafa "mahatakatra" azy.
Tetikasa lava sy tetik'asa virtoaly
Google dia tsy te handany ny fotoana hanarahana ny fironana Virtual Reality izay misy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny mpijery baoritra nohatsaraina. Ny fanatsarana azy dia tsy misy afa-tsy dingana telo hanangonana azy io.
Tetikasa Loon dia Balaonina avelao LTE izay mandeha amin'ny haavo avo ary izany dia hanome fifandraisana amin'ny faritra 40 kilometatra toradroa.
Ny rindrambaiko fampandrosoana ny fampiharana Android dia havaozina miaraka fanampiana an'i C / C ++. Seho vaovao hafa ny AdMob ho an'ny fampidirana Google Analytics, Cloud Test Lab hanandramana ny fampiharana amin'ny fitaovana 20 samihafa maimaim-poana na Polymer 1.0.
Fanomezana toy ny valiha
Alohan'ny hamaranana fanomezana amin'ny endrika rindrambaiko Android M ofisialy ary izay ihany no misy ankehitriny amin'ny topi-maso Android M.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Famintinana ny zavatra rehetra hitantsika tao amin'ny Google I / O 2015
y dia hoy izy:
Iza amin'ireo fiasa vaovao ireo no mifanaraka amin'ny BLACKBERRY?